IiVidiyo - ILizwi eliSiseko • Ukucinga kunye nokuPhelela kunye neHW Percival
UkuCinga nokuPhelela, ngo UHarold W. Percival, ipapashwe ngabaninzi njengencwadi epheleleyo kunazo zonke ebhaliweyo kuMntu naseMhlabeni. Ukuprintwa iminyaka engaphezu kwe-70, ikhupha ukuKhanya okuqaqambileyo kwimibandela enzulu ephazamise abantu.Iphepha lethu leVidiyo liquka ukunikezwa komsindo kwephepha lokuqala le-3 intshayelelo kunye neengcamango, usebenzisa amagama kaPercival, ngendlela engavamile UkuCinga nokuPhelela yabhalwa.
Harold Percival wachaza indlela yakhe enomdla, ubunzima bokuqaphela uNgqiqo kwi-foreword kwi-magnum opus yakhe, UkuCinga nokuPhelela. Le vidiyo yingxelo evela kula maphepha. Lo ngumzekelo kuphela apho kusetyenziswa umntu wokuqala u- "Ndi". Ibonakala naphi na apha UkuCinga nokuPhelela. U-Percival wathi wayekhethile ukuba incwadi imele ngokwayo kwaye ingathonyelwa ubuntu bakhe.